Fed​၏ ငွေကြေးမူဝါဒများကို၂၁:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။.
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သော ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် လာမည့် ၆လတာအတွင်း သုံးကြိမ်မြောက်အတိုးနှုန်းတင်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု Fedအကြီးအကဲများမှ ပြောဆိုသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်. ငွေဖောင်းပွမှု နည်းနေသော်လည်း ယခင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောဆိုသွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်း ကောင်းမွန်လာနေတာဖြစ်ပါသည်.
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် Fed၏ ငွေကြေးမူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေနှင့် လာမည့်ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းတွက်ဆထားခြင်း မရှိပါ. သို့သော် ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း balance sheetထဲမှ ၄. ၅ထရီလျံဒေါ်လာကို လျှော့ချသွားမည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ယခု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြားရ၊ မကြားရကို စောင့်ကြည့်နေကြတာ ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ မူဝါဒများအပေါ် မူတည်နေတာ ဖြစ်ပါသည်. အကယ်၍ ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ် အကြီးအကဲများအနေဖြင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးသည် သူတို့ရည်မှန်းထားသည့် အခြေအနေအတိုင်း ဦးတည်နေသည်ဟု ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားပါက balance sheet လျှော့ချမည့် အစီအစဉ် အလေးသာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.